डेढ अर्बको औषधि ५ महिनादेखि विमानस्थलमै - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
मंसिर ४ । काठमाडौं, भूकम्पका घाइतेको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै विभिन्न संघ–संस्थाले हवाई कार्गो गरी पठाएका करिब डेढ अर्ब मूल्यबराबरको औषधि त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा थन्किएको छ । एक प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्न नसक्दा ठूलो परिमाणको औषधि भन्सारमा थन्किएको हो । त्यसमध्ये करिब १० प्रतिशत औषधिको म्याद गुज्रिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ।
गत असार तेस्रो सातापछि भूकम्पपीडितलाई सहयोग पुर्‍याउन भन्दै अमेरिकी गैरसकारी संस्था होप प्रोजेक्ट युएसए र अन्य चारवटा संस्थाका नामबाट डेढ अर्बबराबरका महँगा औषधि नेपाल भित्रिएको थियो ।
त्यतिवेला भूकम्पकै लागि भनिए पनि २० असारपछि प्राप्त औषधिलाई सरकारले एक प्रतिशत भन्सार लिने निर्णय गरेको थियो । ढिलोगरी प्राप्त ती औषधि महसुल एक प्रतिशतको दरले डेढ करोड बढी तिर्नुपर्ने भएपछि मन्त्रालयको आपूर्ति महाशाखाले औषधि ल्याएको थिएन ।
अस्पतालमा समस्या उस्तै
सरकारले औषधिको आपूर्ति सहज बनाएको र गोदाममा पर्याप्त रहेको दाबी गरे पनि अस्पतालहरूमा भने समस्या उस्तै देखिएको छ । औषधि तथा उपकरणको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा अस्पतालहरूले पहिलेको तुलनामा उपचार संख्यामा कटौती गर्दै गएका छन् । बिरामीहरूसमेत पहिलेको तुलनामा अस्पतालहरूमा कमी देखिएका छन् ।
बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. ज्योतेन्द्र शर्माले असहज परिस्थितिलाई पार लगाउन कम संख्यामा उपचार गर्नुपरेको बताए । ‘दैनिक हुने अप्रेसन ६–७ बाट ३–४ वटामा झारिएको छ । एन्जियोग्राम र एन्जियोप्लास्टी १८–२० वटाबाट घटाएर १२–१४ मा झारिएको छ । यसो गर्नुको कारण इमर्जेन्सीका लागि औषधि जोगाउनु र पछिसम्मका लागि उपचार निरन्तर दिन सकियोस् भन्नु हो,’ शर्माले भने ।
वीर अस्पतालका निर्देशक डा. स्वयंप्रकाश पण्डितले समस्या यथावत् रहेको बताए । ‘पर्याप्त औषधि छैन । कतिपय लाइफ सेभिङ र आकस्मिक औषधिसमेत बजारमा छैन भन्दै मानिसहरू भौँतारिरहेका छन् । त्यसैकारण अप्रेसनलगायतका उपचार सेवामा कटौती गर्नुपरेको छ । सरकारले स्टक यति छ भनेको छैन । सप्लायरले पनि दिन्छु भन्न सकेको छैन । त्यसैले अवस्था ज्युँका त्युँ नै छ,’ उनले भने ।
यस्तो अवस्था त्रिवि शिक्षण अस्तपाल, पाटन अस्पताल, परोपकार प्रसूतिगृह, निजामती अस्पतालमा समेत रहेको सम्बन्धित अस्पतालका निर्देशकहरूले जनाएका छन् ।
अस्पतालको क्यान्टिनमा दाउरा
ग्यास नभएपछि अस्पतालका क्यान्टिनका भान्सामा दाउराको प्रयोग हुने गरेको छ । बाासबारीको सहिद गंगालाल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, प्रसूतिगृह
अस्पतालजस्ता ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामीका लागि खाना पकाउन दाउराको प्रयोग भइरहेको छ ।
एम्बुलेन्सलाई इन्धन, डाक्टरलाई छैन
अस्पतालका एम्बुलेन्सलाई इन्धन दिए पनि निजी गाडीहरूलाई इन्धन उपलब्ध गराइएको छैन । चौबीसै घन्टा अनकलमा रहने र जुनसुकै वेला अस्पताल आउजाउ गर्नुपर्ने डाक्टर तथा नर्सहरू पीडामा छन् । इन्धन नपाई अस्पतालका गाडी पर्खनुपर्दा ड्युटीमा असर पर्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।
प्लेनबाट ल्याइयो कामचलाउ ब्लड ब्याग
तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका लाखौँ संख्याका ब्लड ब्याग सीमानाकामा थुनिएपछि ब्लड बैंकले कामचलाउ ब्लड ब्याग हवाईजहाजबाट झिकाएको छ । मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले बजारमा ब्लड ब्यागको अभाव भएपछि रक्तदान कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको र अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई रगत लैजान समस्या परेको थियो ।
ठूला सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरूले औषधिसहित सलाइनको समेत अभाव भएको बताउँदै आएका छन् । तर, स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति महाशाखाले आफ्नो गोदाममा अहिले पनि झन्डै तीस हजार बोतल नर्मल सलाइन सुरक्षित रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, भिटामिन र ग्लुकोजसमेत गरी १२ हजारभन्दा बढी गोदाममा मौज्दात छ । महाशाखाका निर्देशक डा. भीम टिंकरीले भूकम्पका वेला प्राप्त सहयोगबाट संकलित सलाइन, ग्लुकोजजस्ता अत्यावश्यक औषधिजन्य पदार्थ गोदाममा थन्किएको बताए । उनले ती औषधि आवश्यकताका आधारमा उपत्यकाका केन्द्रीय अस्पतालमा पठाउन सकिने जानकारी दिए ।